IINDIDI ZEMVULA YANGASESE (IINGCAMANGO ZOYILO) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iindidi zeMvula yangasese (Iingcamango zoyilo)
Iindidi zeMvula yangasese (Iingcamango zoyilo)
Nasi isikhokelo sethu kwiindidi zeeshawari zangasese kubandakanya iindlela ezithandwayo zoyilo, iingcango, iintloko zeshawari kunye nezinto. Ishawa yakho yinxalenye ebalulekileyo yegumbi lokuhlambela. Emva kosuku olude, olunzima ukuphuma ekhayeni lakho - nokuba kungokusebenza okanye ukudlala - akukho nto ilunge ngaphezu kokungena kwisitya sokuhlambela uyeke amanzi ahlambe amaxhala akho, ukukhathalela kunye nokubila kwemisebenzi yosuku kude.
Uhlobo lwesitya sokuhlambela olukhethileyo luya kukunceda ukuba wenze indawo yokuphumla oyifunayo kwindawo yakho yangasese efanelekileyo. Ufuna indawo yokuhlambela apho unokuhlala kwaye ukhululeke kuyo. Ishawa yakho kufuneka ibe yindawo yokucamngca njengendawo eyandisa inkangeleko yekhaya lakho.
Xa ukhetha phakathi kweentlobo zemvula yokuhlambela, kuya kufuneka ujonge iindlela ezahlukeneyo kunye noyilo. Unokukhetha phakathi kweeshawa zesiko kunye nemvula esele ikhethiwe. Uya kuba nokukhetha kweendlela ezahlukeneyo zeshawari kunye neendidi ezahlukeneyo zeengcango zeshawa kunye neesidi. Uhlobo lwesitya sokuhlambela osikhethayo kufuneka silungele uyilo olujikeleze igumbi lokuhlambela kwaye likwanele neemfuno zakho.
Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zokuhlambela ngaphandle kwaye kunokuba nokudideka ukuba yeyiphi kanye kanye ekufaneleyo. Ukukunceda wenze esona sigqibo sihle, sichonge imibuzo emihlanu ebalulekileyo ekufuneka uzibuze yona nokuba kutheni ibalulekile. Landela kunye nokwenza esona sigqibo sihle malunga nokuba luhlobo luni lokuhlambela lokuhlambela iphupha lakho lizaliseka.
Umxhubi woHlaziyo lweNkqubo yokuHlamba
Inkqubo yokuhlamba i-Thermostatic
Inkqubo yokuhlamba umbane
Iindidi zeeNtloko zokuhlamba
Yophahla Onyuswe iNtloko Shower
Ukumisela iNtloko yokuhlamba enye
Multi Setting Shower iNtloko
Imilinganiselo Igumbi lokuhlambela
Yodongwe / Porcelain Tile
Marble / Travertine / Iithayile zamatye
I-Quartz yobunjineli / iMarble eQulunyiweyo / iziXhobo eziPhezulu zoPhezulu
Fibreglass One Piece Shower Kits
Uxande okanye Square Shower ebiyelweyo
Ukuvalwa kweXabiso leKona
Shower egosogoso ebiyelweyo
Round Shower ebiyelweyo
Ityhubhu kunye neShower Combination
Iindidi zeeShower Doors
Iingcamango zokuhlamba ngokwezifiso
Ukuhlamba ngeeJets zokutshiza umzimba
ICarrara Marble Shower
Ukuhlamba iglasi ngeHhafu yeDonga
Ukuhlamba ngokuKhanya kweNdalo
Ngaphakathi / Shower yangaphandle
Iglasi yeFrosted Glass yoBucala
Uhlobo lweenkuni zePorcelain Shower Shower
Ukuhlamba iTayile emhlophe
Indibano yokuhlamba kunye nebhafu
Ukuhlamba iSpa ngasese
Shower yangoku yangoku
Iintloko ezininzi zokuhlamba
Ukuhamba ngaphandle kokungena emnyango
Ukuhlamba ngeTayile eziDibeneyo zeDonga
Ukuhlamba ngeHringbone yePatheni yeTayile
Ukuhlamba ngeGolide kugqityiwe
Ukuhlamba ngeTayile yePateni
Umgangatho weRock Rock Shower
Wakhe kunye noShower wakhe
Shower enkulu kakhulu
Umbuzo wokuqala oza kuwubuza ngaphambi kokuba uqhubeke ngaba ndifuna ukuba neshawa yangokwezifiso, okanye ngaba ishawa esele ikhethiwe?
Ishawa yangokwezifiso iya kwakhiwa ukususela ekuqaleni ngokweenkcukacha zakho. Oku kuthetha ukuba, nganye yecandelo leshawa-ukusuka kwishawari ukuya kumgangatho-uya kukhethwa nguwe. Ishawa yesiko iya kulungeleka ngokukodwa kukhetho lwakho lobuqu.
Iimpawu ezaziwayo zokuyila ishawa zibandakanya:
Iintloko zeeshawari zemvula
Iintloko zeshawari ezimbini
Ukuhlamba isitulo sebhentshi
Ulawulo lobushushu kwidijithali
Sabelana ngemifanekiso eyongezelelweyo yoyilo lwesiko lokuhlamba ngezantsi.
Ngokukhetha ukuba neshawa yangokwezifiso, unokuqiniseka ukuba ishawa yakho iyasifanela isithuba sakho, iimfuno zakho, kunye nengcinga yakho malunga nokuba igumbi lakho lokuhlambela eliphupha liya kujongeka kanjani. Nangona kunjalo, njengoko ishawa yesiko yakhiwe kwasekuqaleni kunokuba nzima kwaye kuthatha ixesha ukuyila. Ukwakha ishawa yesiqhelo kunokuba kubiza kakhulu.
Ishawa esele ikhethwe, kwelinye icala, yile iza sele yenziwe. Kwiimeko ezininzi, iza njengesiqwenga esinye onokufaka nje kwisithuba sakho. Ishawa esele ikhethwe inazo zonke izinto ezifanelekileyo zokuhlamba ezifakwe kwiyunithi enye. Oku kubandakanya iindonga, imigangatho, iingcango, intloko yeshawari, izixhobo zokuhlamba, kwaye - kuxhomekeke kwiyunithi oyikhethileyo, iintlobo ngeentlobo zezilinganisi zeshawari kunye nezixhobo.
Njengeeshawari esele ikhethiwe sele iza nayo yonke into oyifunayo, konke okufuneka ukwenze kukuthatha iyunithi ehambelana nezinto ozithandayo kunye neemfuno zakho kwaye ufake yonke loo nto ngexesha elinye. Oku kukugcinela ixesha elininzi kunye nentengiso-ukungabikho kwazo zonke izinto ezizezakho onokuzifuna.
Kukho iintlobo ngeentlobo zemvula esele zikhethwe ezikhoyo ngaphandle kunye nezinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Ukuba uthatha ixesha lakho kwaye ukhethe ngononophelo, uya kufumana enye enokuhambelana neemfuno zakho kwaye utshatise isitayile sakho sokuhlambela kunye nomxholo. Le yeyona nto ilungele uhlahlo-lwabiwo mali.
Ikhithi yokuhlambela eyakhiwe kwangaphambili kunye noyilo lwe-angled- Jonga eWayfair
Ndonwabile unyaka wokuzalwa womtshato
Loluphi uhlobo lwenkqubo yeshawari oyifunayo?
Nokuba uthatha isigqibo sokuhamba neshawa yangokwezifiso okanye ishawa esele ikhethwe ngaphambili, kubalulekile ukuba ukhethe inkqubo yeshawari eya kukunika amava eshawa owafunayo.
Uhlobo lwenkqubo yeshawari oyikhethayo kwaye uyifake kwigumbi lokuhlambela yakho iya kukuvumela ukuba ulawule zombini iqondo lobushushu kunye noxinzelelo lwamanzi awela kwintloko yakho yeshawari. Oku kukuvumela ukuba ubone ukuba ufuna ukuba amava akho eshawa azive njani.
Le yeyona nkqubo isisiseko yokuhlamba kwaye eyona nto abantu abaninzi basebenzise ukuyifumana kwigumbi lokuhlambela.
Ishawa yokuxuba ithatha igama layo kwinto yokuba inkqubo ikuvumela ukuba udibanise kunye namanzi ashushu nabandayo ukufumana ubushushu obufunayo. Inxalenye esisiseko yeshawari yokuxuba yintloko yeshawari kunye nevalvu ezimbini okanye ezimbini zeshawari. Ngokuguqula iivalves zeshawari uyakwazi ukulawula ukuba kubanda kangakanani okanye kubanda kangakanani na amanzi ashushu kwishawari yentloko. Oku kukuvumela ukuba ulawule ubushushu bebhedi yakho yonke.
Ezi ntlobo zeenkqubo zeeshawa ziqhelekile kwaye ziyathandwa kuba kulula ukuzisebenzisa kwaye zilula- kunye noqoqosho- ukufaka.
Njengakwinkqubo yeshawari yokuxuba esetyenziswa ngesandla, into echaza inkqubo yeshawa ye-thermostatic yinto yokuba ikuvumela ukuba ulawule ubushushu bamanzi aphuma entlokweni yakho yeshawari. Umahluko kukuba, endaweni yokulawula ngesandla iqondo lobushushu ngokulawula ivalve yeshawari, ucwangcisa ubushushu bakho obulungileyo bamanzi kwi-thermostat. Oku kuqinisekisa ukuba ishawa yakho ikubonelela ngokuzenzekelayo ngobushushu bamanzi obungaguquguqukiyo.
(Ishawa yokunyanga ngokulawula ubushushu ngesandla- Jonga eWayfair)
Iinkqubo ezininzi zeshawari ze-thermostatic zibandakanya iphaneli yolawulo lwedijithali. Xa besenza, ezi nkqubo zeshawari zinokubizwa ngokuba ziishawari zedijithali.
Uncedo kolu hlobo lwenkqubo yokuhlamba, ewe, kukuhambelana kobushushu bamanzi. Ngolu hlobo lwenkqubo yokuhlamba akusekho ukuma ecaleni ukungcangcazela okanye ngempazamo uzitshise ngelixa uzama ukufumana iqondo lobushushu ngokuchanekileyo.
Iinkqubo zeshawari ze-Thermostatic zilungele ngokukodwa amakhaya anabantwana abancinci okanye abantu abadala. Kunqabile ukuba aba bantu banokuthi ngengozi bazitshise okanye bazitshise ngelixa bevula ishawa.
(Intloko yolawulo lobushushu kwidijithali- Jonga eWayfair)
Ngenkqubo yokuhlamba yombane, ufumana indawo yokufudumeza eyakhelwe ngaphakathi ebashushu amanzi abandayo avela kumanzi akho asekhaya. Esi shawara sisebenza sodwa kwaye ngokuzimeleyo kwibhoyila lakho lasekhaya okanye kwinkqubo yamanzi ashushu. Iyunithi yokufudumeza eyakhelwe-ngaphakathi ithatha amanzi abandayo kunikezelo lwakho lwasekhaya kwaye uwafudumeze phambi kokuba aphume kwintloko yakho yeshawari.
Ngenxa yokuba inkqubo yeshawari yombane inesifudumezi sayo, inokuwufudumeza amanzi ngokukhawuleza kunesixubi okanye inkqubo yokuhlamba ye-thermostatic. Endaweni yokudibanisa amanzi abandayo kunye ashushu ukwenza ubushushu obufanelekileyo, avele afudumeze amanzi ngqo. Oku kuthetha ukuba akukho mfuneko yokutshintsha inkqubo yasekhaya yamanzi ashushu kwaye ulinde ukuba iqale ukubonelela ngamanzi ashushu ngaphambi kokuba uhlambe. Into ekufuneka uyenzile kukutsiba ungene kwaye uvule isifudumezi semvula.
Ishawa yombane ithambekele ekubeni noqoqosho ngakumbi xa kufikwa ekusebenziseni amanzi. Nangona kunjalo, njengoko ingumbane kwaye itsala kunikezelo lwamandla ekhayeni lakho, iya kuba nefuthe kwityala lakho lombane. Zikwakhangeleka ngathi zineeshawki ezincinci emva koko zinokungahambelani nombono womntu wonke malunga nokuba ishawa yabo efanelekileyo ikhangeleka njani.
(Ishawa yombane ngegeji yobushushu yedijithali- Jonga kwi IAmazon )
Luhlobo luni lwentloko yeshawari endifanele ukuyikhetha? Emva kokuthatha isigqibo malunga nendlela ofuna ukulawula ngayo ubushushu bamanzi, inyathelo elilandelayo iya kuba kukuthatha isigqibo malunga nendlela ofuna ukutshiza kwakho amanzi kukubethe. Oku kuxhomekeke kuhlobo lwentloko yeshawari ogqiba ekubeni ube nayo.
Kukho iintlobo ezintathu ezisisiseko seentloko zeeshawari ngokuxhomekeke kwindlela kwaye zibekwe phi kwindawo yakho yokuhlamba.
Intloko yeshawa emileyo- Jonga eWayfair
Olu lolona hlobo lwesintu lwentloko yeshawari. Zibekwe eludongeni lweshawari kwaye zihlala zibonisa intloko ehlengahlengisiweyo ukuhambisa isitshizi samanzi. Iintloko zeshawari ezingaguqukiyo ziza ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeVictorian, ukuwa kwemvula, ukolula ingalo kunye nejeti ezininzi.
Le ntloko yeshawari ikwanyuswe eludongeni kodwa inombhobho oguqukayo ovumela ukuba uwuthathe eludongeni ukuze ukhokele ngokuthe ngqo ukutshiza uye apho ufuna khona.
(Ishawa yesandla ngombhobho oguqukayo- Jonga eWayfair)
Olu hlobo lwentloko yeshawari lubekwe eluphahleni lweshawa yakho. Kwaziwa njengeentloko zeeshawa zemvula, zisebenza kakuhle ngoxinzelelo lwamanzi oluphakathi okanye oluphantsi. Kungenxa yokuba, ukubekwa kwentloko yeshawari kuvumela amandla omxhuzulane ukuba asebenze emanzini kwaye avumele ukuba ikunethisele njengoko umi phantsi kwawo
Enye indlela yokuhlela iintlobo ezahlukeneyo zeentloko zeeshawari ngokuya nokuba ungalawula njani amanqanaba oxinzelelo lwamanzi kunye nesitshizi esiphumayo.
Ishawa emfanekisweni ongentla inesilingi esinyusiweyo entloko, kunye nodonga oluphezulu lwedonga kunye nesitshizi sendoda.
Njengoko igama libonisa, olu hlobo lwentloko yeshawari inesimo esinye, esingaguqukiyo. Ukuhamba kwamanzi kule ntloko yeshawari kuyahambelana kwaye kuzinzile. Ungazifumana ezi ntloko zeshawari kwiipateni ezahlukeneyo zokutshiza, kodwa xa ukhetha le ntloko, iya kuba njalo.
Kwindawo yokuphumla, yokucoca ishawa, intloko enye yeshawari yokuseta ingaphezulu kokwaneleyo. Kukhetho olulungele uhlahlo-lwabiwo mali. Kodwa ukuba ufuna amava ahlukeneyo, afana ne-spa xa uhlamba, kuya kufuneka ujonge kuhlobo olulandelayo lwentloko yeshawari kolu luhlu.
Ngentloko yeshawari yokusetha okuninzi, unokutshintsha useto lwesitshizi lwentloko yakho yeshawari ukuze ukwazi ukwenza amava eshawa ahambelana neemfuno zakho kunye neemfuno zakho.
Ezinye iintlobo eziqhelekileyo zeepateni zokutshiza onokuzifumana ngentloko yokuhlamba iseti yokugcoba ngumzimba opheleleyo, ukutshiza ngesipreyi, ukutshiza okungahambi kakuhle kunye nokutshiza okusindisa amanzi. Uninzi lweentloko ezininzi zokucoca iintloko zeshawari ziyakuvumela ukuba ulawule ubungakanani bomjelo ovela kwintloko yeshawari.
Ngamava obutofotofo ngokwenyani, unokufuna nokujonga kwenye yezi ntloko zeshawari zilandelayo: Ishawa yemvula kunye nenqaba yokuhlamba.
Sikhankanye ishawa yemvula okanye intloko yemvula ehlayo ngaphambili xa besithetha ngeentlobo ezahlukeneyo zeentloko zeeshawari ngokwendlela ezibekwe ngayo. Njengoko besesitshilo ke, le ntloko yeshawari ibekwe eluphahleni kwaye isebenzisa amandla omxhuzulane ukuhambisa isitshizi ukuze siwe kwaye kuwe uthanda amathontsi emvula.
Ishawa yemvula ihlala isesha esinye sokusetha kodwa isethingi esinye yenye yezona ntlobo zidumileyo kuseto. Ishawa yemvula ikunika amava ahlaziyayo kwaye anqabileyo. Uxinzelelo olunobunono lwesitshizi, kunye nokuthamba kwemvula: ukuntywila kwamathontsi okuwa kuyathuthuzela kwaye kufanelekile ukuhlamba iintsuku ziyakhathala.
Inqaba yokuhlamba yintloko yeshawa eyilwe ngokukodwa eyongeza umdla onomdla kuyo nayiphi na indawo yokuhlambela.
Endaweni yombhobho omnye, i-tower tower ineebhabhu ezininzi zokuyalela ukutshiza emzimbeni wakho. Inqaba yakho yokuhlambela esisiseko sisisiqwengana esime nkqo esigcwele ngemilomo yemilomo edla ngokulungelelaniswa ukuze sikwazi ukutshiza amanzi kuwe ukusuka kumacala ahlukeneyo.
Uninzi lweenqaba zeshawari zinemilomo ehlengahlengisiweyo kunye noseto lweeshawa oluninzi ukuze ukwazi ukulawula isitshizi kunye nokwenza amava akho afana ne-spa. Kufana nokuba kwijacuzzi, ngaphandle kokuma kwakho.
(Shower tower with multiple sprayers - Jonga eWayfair)
Xa uqwalasela indawo yokulungisa indawo yangasese akukho bungakanani bunye obulingana nabo bonke ubungakanani beeshawari esemgangathweni, kukho indlela esebenzayo yokukunceda ufumane okufanelekileyo. Ukufumana ubungakanani obulungele wena, zama ukuma neengalo zakho zandisiwe kwaye ujikeleze kwisangqa. Oku kuya kunikezela njengesikhokelo kwinani lesithuba onokuziva ukhululekile kulo ngaphandle kokuziva ungathandabuzeki.
Uninzi lwabantu luya kuziva lukhululekile ngobungakanani beshawa esisezantsi esingu-48 ″ x 36 ″. Nangona kunjalo, kuxhomekeke kwisithuba sakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali oku akunakwenzeka.
Kwindawo yokulungisa encinci yokuhlambela esona sincinci sincinci esincinci onokufumana ukuba ngama-32 ″ x 32 ″. Kulabo abanolwakhiwo olukhulu lweemodareyithi ubungakanani obulungileyo buya kuba nemilinganiselo ephantsi yama-60 '' x 36 ''. Ubungakanani obukhulu ngakumbi bamkelekile ukuba uya kuthi wongeze izinto zoyilo lwesiko ezifana nebhentshi okanye iintloko ezimbini zeshawari.
Ukukunceda kuyilo loyilo kukho uluhlu lwe Isoftware yokulungisa indawo yangasese iyafumaneka. Ezi ntlobo zeenkqubo ziluncedo olukhulu ekukhetheni izinto kunye nokucwangcisa ubume begumbi ngaphandle kokufuna ukuqesha kuqala uyilo.
Emva kokuba ubazi ubungakanani besakhiwo sakho seshawari kubalulekile ukuba ujonge ngononophelo izinto ofuna ukuzisebenzisa kwiindonga zakho zeshawari.
Xa ukhetha ezona zinto zibalaseleyo kudonga lwakho lokuhlamba kubalulekile ukuqaphela izinto ezininzi ukuqinisekisa ukuba ukhetha olona hlobo lubalaseleyo loyilo lwakho.
Kufuneka inganyangeki ngamanzi.
Kufuneka kube lula ukuyicoca
Kufuneka ihlale ixesha elide
Ezona ntlobo zixhaphakileyo zezinto zokuhlamba zizo zilungele ezi nqobo zingentla. Nazi ezinye zeentlobo ezithandwayo kakhulu zodonga lokuhlamba olusetyenziswa ngoku.
Zombini iiceramic kunye ne-porcelain tile zakhiwe ngodongwe ezenza ukuba zifane. Iitayile ze-ceramic kunye ne-porcelain zizonke zilungile kwishawa. Nangona kunjalo, ukuzinza okupheleleyo kwe-porcelain. Ngapha koko i-porcelain tile ihlala yomelele kwaye ingaphantsi kuneethayile zeceramic ezenza ukuba zilungele igumbi lokuhlambela.
Ukuba neethayile zelitye lendalo kwishower enjengeemabhile, itravertine, igranite kunye nesileyiti kuyabutofotofo kwaye kujongeka kumangalisa. Icala elisezantsi zizinto ezenziwe ngamatye endalo ezinokufuna isixa esifanelekileyo solondolozo njengokutywinwa nokucocwa ukuze ziqhubeke zijongeka. Ezinye izimbiwa zendalo ezinjengeemabhile zinenani elikhulu lesinyithi elinokubangela ukuba imiba yokujika kombala ikhule ngokuhamba kwexesha ukuba ayitywinwanga kakuhle.
Lo mfanekiso ungasentla unenqaku le- ishawari yetravertine ngelitye ilitye inlay kunye nokwadala ukuba. Amampunge emarmore emhlophe eneesinki ezibini zinika umahluko okhangayo kwi-beige yeshawari yendalo yelitye.
Kukho izinto ezininzi ezenziwe ngabantu ezisetyenziswa rhoqo kuyilo lokuhlamba kunye neziphumo ezilungileyo. Ezinye zezona ziqhelekileyo yimarble ekhulisiweyo, i-quartz yobunjineli kunye nezinto zomphezulu eziqinileyo ezinje ngeCorian. Zombini i-marble ekhulisiweyo kunye ne-quartz eyakhiwe yenziwa ngokudityaniswa kwamasuntswana amatye asemhlabeni kunye nokudityaniswa nentlaka ukwenza imveliso ekhangeleka yendalo. Zombini zinemibala eyahlukeneyo kunye neepateni eziyinyani zokutshatisa uyilo lwakho.
ICorian ligama lophawu lwezinto zomhlaba eziqinileyo ezenziwe yinkampani yaseDupont. Imveliso yabo ikwaxuba izinto zendalo ngokudibanisa i-acrylic polymer kunye ne-alumina trihydrate. Kukho izibonelelo ezahlukeneyo zokwenza izinto eziqinileyo zomhlaba ezinje ngeCorian ngaphezulu kwethayile njengokugcina kunye nobomi bemveliso.
Ikhithi yokuhlamba iFiberglass - Jonga eWayfair
Ikhithi yokuhlamba i-fiberglass yindlela efanelekileyo kulabo abafuna ukufikeleleka kwaye kulula ukuyifaka. Ezi khithi ngokubanzi zakhiwe ngeglasi yefayibha kunye nokugqitywa kwe-acrylic ecwebezelayo ukuyigcina inqabile kwaye yenza kube lula ukuyicoca.
Luhlobo luni lwesimo sokuhlamba ekufuneka usifakile? Xa uyila amava eshawari awodwa nahlaziyayo, asinakuwutyeshela ubuhle nokubaluleka kokukhetha imilo efanelekileyo yokuhlamba.
Imilo efanelekileyo yokuhlamba ingenza okanye iphule yonke indlu yakho yokuhlambela njengesihlambi esingalinganiyo singonakalisa umxholo jikelele kunye nokujonga kwendawo yakho. Ishawa engakulungeliyo iya kuphazamisa amava akho okuhlamba njengoko, ukuba awukhululekanga, unokucoceka kodwa awuyi kukhululeka okanye uthomalalise.
Ubume besitali sakho sokuhlambela buxhomekeke kubume bendawo yakho yokuhlambela okanye indawo yokuhlambela. Indawo yakho esisiseko yokuhlambela ibandakanya iindonga zeshawari kunye nomgangatho. Ukubeka nje, kulapho umi khona ukuze uhlambe.
Ngokokuma kwesitali setafile, kukho iintlobo ezintlanu ezisisiseko seemilo zeshawari onokukhetha kuzo:
Indawo yokufaka isitya yeshawari yesikwere- Jonga eWayfair
Obu sesona similo sisisiseko esinokuza neshawa. Njengokuba igama lisitsho, lenziwe ngamacala amane afaka indawo yoxande okanye yesikwere.
Isizathu sokuthandwa koxande okanye isikwere seshawa esirhangqileyo kukungqinelani. Indawo evaliweyo yeshawari kolu hlobo inokulingana phantse nayiphi na indawo yokuhlambela kwaye iya kulungela phantse nasiphi na isitayile yoyilo lokuhlambela. Unokufumana iindawo ezininzi zokuhlambela zamanzi kule fomu phantse nakuphi na ubungakanani.
Ngokubhekisele kumava akho eshawa, indawo ebiyelweyo yokuhlambela ishawa ibonelela ngendawo eyaneleyo yemisebenzi yakho yeshawari ngoko ke lukhetho olufanelekileyo oluza kusebenza phantse nayo nayiphi na inkqubo yeshawari kunye nentloko yeshawa.
Ikhoneni elixineneyo leshawa yeshawari- Jonga eWayfair
ukuba wenzeni kwitheko lomtshato
Olu luhlobo olulungileyo lokuhlamba ukuba unendawo encinci. Olu hlobo lweshawari lwenzelwe ukuba lulingane kwikona yegumbi lakho lokuhlambela.
Uninzi lweemvula ezivaliweyo zekona ziza ngoxande, ii-angled, okanye imilo yesikwere, kodwa zininzi zigobile.
Indawo ebiyelweyo yokuhlamba - Jonga eWayfair
Indawo evaliweyo yeshawari egobileyo ngokusisiseko yindawo ebiyelweyo enamacala amathathu kwiindawo ezixineneyo zeshawari ezine. Njengeeshawari ebiyelweyo yekona, nayo iyakhiwa ukuze ingene kwikona yendawo yakho yangasese.
Ikwabizwa ngokuba yindawo evaliweyo yokuhlambela i-quadrant, udonga olubiyelweyo lweshawa luvala indawo enomilo wesilayidi se-pizza. Iindonga ezimbini ezithe nkqo zenza i-engile ngelixa udonga lwesithathu, ihlala ingena okanye umnyango kwishower, iibhlorho ezikwi-engile kodwa kwishawari evaliweyo yekona, ngumgca ogobileyo. Ijika lodonga lwesithathu lwenza indawo ethe kratya kumgca ocacileyo othe ngqo.
Njengoko igama layo lisitsho, indawo ebiyelweyo yeshawari imile okwesangqa. Ngelixa inokwenza into enomdla kwigumbi lokuhlambela, uzakufuna indawo enkulu ukuba uza kufaka le milo yeshawari kuyilo lwakho lokuhlambela.
Yimilo emanzi esetyhula emileyo ekhululekileyo, ethetha ukuba ayizukusebenzisa iikona zegumbi lakho kwaye kuya kufuneka ibekwe embindini
Njengoko igama lisitsho, oku kuthetha ukuba udibanisa izinto ezimbini zokuhlambela kwenye. Ibhafu kunye neshawa.
I-tub yokuhlambela i-combo ngokusisiseko ishawari apho ishawa ifakelwe ngaphezulu kwebhafu, ke ngoko ibhafu sisiseko okanye umgangatho weshawa.
Ukuba nebhafu kunye neshawa edibeneyo kwindawo yakho yokuhlambela yinto esebenzayo, yokugcina indawo. Kungenxa yoko le nto uhlobo oluthile lokuvalwa kweshawa luthandwa kwiihotele. Ikwavumela ukuba ube nezinto ezahlukeneyo kwindawo yakho yokuhlambela njengoko ngoku uneendlela ezimbini zokuhlamba iinkxalabo zosuku. Nangona kunjalo, akukho nto inokuphika ukuba uninzi lwee-combos zebhafu kunye neeshawari azikho mhle kakhulu. Cinga ngaphambi kokuba uthathe isigqibo malunga nokuvalelwa.
Loluphi uhlobo lomnyango weshawa ekufuneka ukhethe? Ke ngoku ekubeni uthathe isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwendawo yokuhlambela yeshawa kunye nentloko yeshawari oyifunayo, into yokugqibela ekufuneka uthathe isigqibo ngayo kukuba loluphi uhlobo lomnyango weshawari ekufuneka ukhethe.
Umnyango wakho weshawari uyinxalenye yokugqibela yeshawa yakho yamaphupha njengoko yindlela oqinisekisa ngayo ukuba ishawa yakho yindawo entle yokukhangela kwihlabathi langaphandle. Xa ungena kwindawo ebiyelweyo yokuhlamba kwaye uvale umnyango weshawari emva kwakho, ufuna ukubanako ukuvimba umhlaba wangaphandle kwaye wenze ikoko emnandi yokuthambisa.
Kukho umbandela osebenzayo kumnyango wokuhlambela olungileyo. Ufuna ukuthintela yonke indawo yokuhlambela ukuba ingabi manzi ngelixa uhlamba kwaye uphephe umonakalo wamanzi onokwenzeka.
Ukwafuna umnyango wokuhlamba ukuze ukhuseleke kuyilo, jonga isitayile kwaye uvumele ukonwabela igumbi lakho lokuhlambela. Jonga eli phepha ukufumana ezinye izimvo malunga iintlobo zeengcango zeshawa iyafumaneka, kubandakanya izimbo zeglasi kunye nokwahluka.
Kukho iintlobo ezintathu ezahlukeneyo zeminyango yokuhlamba onokukhetha kuyo:
Ucango lwesilayidi esityibilikayo lubekwe kwisakhelo ekungeneni kwendawo yakho yokuhlambela. Ukuze ungene okanye uphume kwishawa yakho, utyibilikisa ipaneli evulekileyo okanye evaliweyo.
Ucango oluhle lokuhlamba olugcweleyo lugcwele ubude kwaye alunamanzi kwaye lugcina amanzi avela kwishawari yakho ukuba angangeni egumbini. Ikwaqinisekisa ukuba ukhuselekile nakweyiphi na iidrafti eziphambukayo okanye imisinga yomoya.
Umnyango weshawari ongenasiphelo
Olu luhlobo olulungileyo lokungena emnyango weshawa ukuba unendawo encinci, njengoko ingena kwisakhelo sokuvalela ishawa yakho kwaye ayijiki, akukho mfuneko yokuba nendawo engenanto eyongeze ishawa yakho emnyango kufanelekile.
Umnyango weshawari ojikeleziweyo ngumnyango weshawari oqhotyoshelwe ecaleni kwendawo yokungena yeeshawari. Umnyango uphumle kwiihenjisi, ezithetha ukuvula okanye ukuvala umnyango, uyaphuma uye kude nendawo ebiyelweyo yeshawari.
Umnyango weshawa ojikeleziweyo
Unonophelo kufuneka lwenziwe ukuze kuqinisekiswe ukuba ucango lweshower oluxhonyiweyo luqhotyoshelwe ngokukhuselekileyo kwaye lutsho lubhekise kwicala lokungena kweshawa. Awufuni ukuphuma kwamanzi okanye iidrafti zingene ngaphakathi. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba ushiya indawo eyaneleyo ejikeleze ishawa yakho ukuvumela ucango ukuba luvuleke luvuleke ngaphandle kokubetha nantoni na.
Umnyango weshawari ongenazakhelo
Umnyango we-pivot uyafana nomnyango wehenjisi ngengqondo yokuba zombini ziyilelwe ukuba zincanyathiselwe kwicala lokungena kwishawari kunye nokujikela kuvuleke ukuba ungene eshawa.
Umahluko phakathi komnyango wepivot kunye nomnyango oxhonyiweyo yindawo yeehenjisi. Iingcango zeepivot zihlala zixhomekeke phezulu nasezantsi kwendawo yokungena. Nangona kunjalo iingcango zepivot zinokubonwa ngehenjisi enye eqhubekayo efikelela phezulu ukuya ezantsi.
Umnyango weshawari wepivot onehenjisi enye
Iingcango zePivot ziyathandwa kwinkangeleko ecocekileyo neyangoku kwaye uzive unenye yezi zinto zinika indlu yakho yangasese. Ukuba unesithuba esincinci kwaye awufuni mnyango wokutyibilika, olu lukhetho olufanelekileyo ngokunjalo. Iingcango ze-Pivot zivuleka zivuleke kwi-arc encinci emva koko zihike iingcango ukuze ungakhathazeki kangako malunga nokubetha ezinye izinto zangasese.
Zininzi iindlela zokuyila ishawa yangokwezifiso. Apha ngezantsi sabelana ngeendlela zokuyila ezakho zokukhuthaza ezakho izimvo zokuhlambela.
Uyilo oluhle lokuhlambela lubonisa ishawari yeglasi engenasiseko esineentloko ezininzi zeshawari kunye nezitshizi zejet. Ithayile yomgangatho wemarble kunye ne-marble engelutho yahluke kakuhle ngokuchasene nendawo emnyama yesikwere. Indawo yokubhabha enkulu yokuhamba enendawo enkulu enombono inika indawo entle yokuphola.
Kukho izizathu ezininzi zokufaka ibhentshi kwifayile yakho hamba uyilo lokuhlamba . Ayisijongi nje kuphela ngesitayile, ibhentshi leshawa linikezela ngokulula, ukuphumla, ukugcinwa kunye nokufikeleleka kwabo bangazinzanga ngeenyawo zabo.
ICarrara marble lukhetho oluthandwayo loyilo lweeshawa kunye neendleko eziphakathi kweedola ezili-125 ukuya kwezingama-300 iinyawo. Kuba i-marble inyibilikisiwe kuyacetyiswa kakhulu ukuba kusetyenziswe isitywina esikumgangatho ophezulu ukunceda ukuthintela ukujika kombala kwelitye lendalo.
I-Quartz lukhetho olukhulu lokuhlamba kuba lilitye elingena porous elingazukufunxa amanzi kwaye liya kunceda ekwenzeni izinto zibe lula ngelixa licoca. Abanini bamakhaya bakwafumana i-quartz ibe yinto ehlala ihleli kakhulu enoluhlu olubanzi lwemibala kunye ne-graining yokukhetha kuyo.
Ukuba ukhe waya kwi-spa yezempilo unokubaleka ngaphaya kwe ishawa yomphunga . Olu hlobo lweshawa luqulathe ukufuma okutywiniweyo ukuze umntu akwazi ukuluyalela ukuba lutshise ngolawulo lwedijithali ukukhulula izihlunu ezibuhlungu kunye nokucoca ulusu kunye nezono. Iishawa ezinomphunga zinokwakhiwa ngokwesiko okanye zingathengwa njengeeyunithi ezizimeleyo zodwa.
Ukuhlamba iiglasi ngeHalf Wall
Ishawa enodonga olunesiqingatha inika ubumfihlo kwindawo yokuhlamba. Olu hlobo lweshawa lukhetho olufanelekileyo kwizibini ezifuna ukuthozama okanye ezinoyilo lokuhlambela oluvulekileyo kwigumbi lokulala eliyintloko ..
Uyilo oluhle lokuhlambela lubonelela ngobuninzi bokukhanya kwendalo kuye nawuphina umntu onwabela ishawa enkulu yeglasi. Igumbi lendlu yecawa yecawa efakwe kwiipaneli ezininzi zeglasi ukuvumela ukukhanya kunye nokugcina indawo ivakalelwa njenge-oasis yendalo yangaphandle.
Ishawa yangaphandle ilungele abo bahlala kufutshane nonxweme ukuze batshize isanti ngaphambi kokungena endlwini. Isebenza kakuhle kwindawo efudumeleyo okanye kwabo banomdla ngakumbi abathanda umbono wokuhlamba phantsi kwelanga okanye iinkwenkwezi. Ukongezwa kwemithi yetiak kunye nelitye lelava kunceda ukomeleza uvakalelo lwendalo kwindawo yonke.
Esi shushu sangaphakathi / sesha sangaphandle asishiyi ngcamango. Uyilo lweshawa lokuhlamba lubonisa iglasi enkulu ejonge kwigadi yangasese yangasemva. Iintloko ezininzi zokuhlambela imvula kunye nezitshizi zibonelela ngegumbi elaneleyo lokuba isibini sihlambe ngokungathi besimi ngaphandle.
Ukongeza ishawa yabucala yeglasi efrijini kwigumbi lokuhlambela lakho kufanelekile kwabo bafuna ukufihlwa okungakumbi. Le ndlu yokuhlambela yaseAsia inomgangatho wendalo uyanconywa yibhafu enkulu erhangqiweyo kunye neefestile ezinqabileyo kunye nendawo yokuhlambela.
Ishawa yendlela yokwenza iinkuni yenziwe ngetreyini ye-porcelain kwaye yenza uyilo olumangalisayo lokukhangela ngaphandle kwayo yonke imiba yolondolozo lweenkuni kwindawo emanzi. Iithoni ezikhanyayo zomthi zomthi zijongeka njenge-porcelain tile apha ngasentla zivusa imvakalelo yendlu yasefama xa enye igqibezela isimbo sangoku.
Ishawa emanzi enkulu kunokuba ngamava okuphumla ngokupheleleyo emva kosuku olunzima emsebenzini. Le ndawo yangasese ye-spa yokugcina indawo yangasese iya kukhangela kwendalo kunye neninzi yezityalo eziluhlaza kunye nokugqitywa kweenkuni ukubonelela ngendawo yohlaziyo olupheleleyo.
Ithayile emhlophe engaphantsi kweshawari yinkqubo yemveli ejongeka isesitayile nanamhlanje. Igumbi lokuhlambela eliboniswe apha libonelela ngethayile enkulu engaphantsi kwendlela ehamba kunye nomgangatho wegranite omnyama kunye nebhabhathi ephezulu yemabhile.
Indibaniselwano yeshawari kunye nebhafu yeyona ndlela ifanelekileyo yokuba abahlambi bahambe ngokungakhathali ukusuka kwibhafu ukuya kwishawari ngaphandle kokubanda okanye ukulahla amanzi kuwo wonke umgangatho wokuhlambela. Uyilo oluhle lokuhlambela lusebenzisa uluhlu lwezinto ezigqityiweyo ezinjengeemabhile ezicwangcisiweyo, i-porcelain floor kunye neendonga, i-glass tile backsplash kunye nelitye le-beige kumgangatho wokuhlamba.
Ishawa yangaphakathi ye-spa inokufezekiswa nge-ambiance efanelekileyo. Inkangeleko yokuphumla le ishawa isebenzisa iindawo ezahlukeneyo zamatye endalo kunye nomthi isitya sokuhlambela kunye nezityalo eziluhlaza ezitshatyalaliswayo.
Uyilo lwala maxesha lokuhlambela lubonisa itreyini yeenkuni yeenkuni ngesitshizi kunye nentloko yeshawa. Endaweni yokuba isikwe eludongeni isepha kunye ne-shampoo le ishawa ikhethe isiseko esincinci sezinto zangasese eziyimfuneko ngelixa uhlamba.
Ishawa eneentloko ezininzi zokuhlamba inokuba luncedo kwabo bathanda iindlela ezahlukeneyo. Ezinye zeentlobo ezithandwayo zibandakanya ishawa yemvula, isitshizi sokutshiza kunye neejethi zodonga. Ikwayimbono entle kwizibini ezingavumelaniyo ngesitayile esithandayo sentloko yeshawari.
Ishawa engena emnyango uyilo kwigumbi elimanzi lokuhlambela unokongeza isitayile kwikhaya. Mhlawumbi esona sizathu sokuyila ngaphandle komnyango akukho cango lishawari lokugcina icocekile.
I-tile ye-wavy ye-3D efumaneka kule shawa yinto efanelekileyo yokuhambelana nendawo yangasese eyilelweyo yangoku. Ithayile inembonakalo egudileyo ebonakalayo kwaye idala umdla omkhulu wokubonakalayo.
I-herringbone pattern ye-tile shawa yenza ukubukeka okumangalisayo okunokujika iintloko. Uyilo lokuhlamba lubonisa i-porcelain tile e-brown ecekeceke ngeglasi engenabala. Iindidi ezimbini zeentloko zeeshawari yibhonasi eyongeziweyo ukuyinika indawo efana ne-spa.
Ukugqitywa kwegolide kuyabuya. Ishawa yangoku inikezela ngeendidi zegolide ukuze zitshatise ngokuvisisanayo kunye nemiphezulu emhlophe emhlophe kunye netreyini eluhlaza engaphantsi kweendonga zodonga.
Iithayile ezintle zepateni yesamente kule ishawa zenza ingxelo. Kuba ezi ntlobo zethayile zeshawari zinemingxunya kufuneka zitywinwe ngetywina elingeneyo ukubanceda bangazonakalisi kwaye bagcine inkangeleko yabo.
Ishawa kunye nomgangatho werwala lomlambo unokubonakala utsalela kwaye uzise imeko yendalo ngaphakathi. Ezi tile ziyinyani kwaye zihlala zingena kwiimakhishithi ezili-12 x 12 kwivenkile.
Qaphela ukuba ukusebenzisa ilitye lomlambo elityana lomnyango emnyango weshawari kunokuba ngumceli mngeni. Xa ufaka imiphetho yamaqhekeza yi-wavy enokwenza ukuba ibe yinkqubo echitha ixesha ukulungelelanisa. Ukongeza, ilitye lomlambo lifuna i-grout eninzi ukuyifaka, kwaye yonke loo grout ifuna ulondolozo oluninzi ukuze ihlale icocekile kwaye ijongeka intle.
Ngoku ngubani ongafuniyo ukubukela umboniso we-TV awuthandayo kwishawari okanye ibhafu? Uyilo lweli hlabathi lwanamhlanje lubonelela ngeendonga ezimhlophe zemabhile ngeentlobo ezahlukeneyo zentloko yeshawari yamava okwenene e-spa.
Yintoni ebitofotofo ngaphezu kokuba eneeshawa zakhe? Uyilo olubanzi lwegumbi lokuhlambela libonisa iimvula ezimbini ezifanayo ezinendawo yokuhambisa ibhafu. Ishawa nganye ineglasi engenabala engenanto kunye nebhentshi layo elihleliyo.
Oku kukhulu kakhulu hamba uhlamba inezinto ezenziwe ngetreyini eyenziwe ngeplasta enesimboli senkuni. Ezinye zeempawu zesiko lokuhlamba ngaphandle kokukhulu kwayo kubandakanya ibhentshi eyakhelwe-ngaphakathi, i-shampoo niches kunye nomgangatho werwala lomlambo.
USamson 1043420 i-Anthology Matte kuMgangatho wethayile, 16.75X16.75-intshi… $ 73.08 umthengisi ogqibelele UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Delta Faucet Lahara 17 Series Dual-Functio… $ 95.51 umthengisi ogqibelele (1493) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-DreamLine SHDR-3445720-01 Aqua Ult… $ 479.99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-122 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
isitokhwe sokugcina izinto ezinomfazi
I-KOLERFLO 90W yokunyusa uxinzelelo lwamanzi iPum… $ 93.99 umthengisi ogqibelele (69) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
igumbi lokulala eligxile kwigumbi lokulala
ukuhombisa njani ishawa yomtshato
imiphezulu yeetafile emaphethelweni iinkuni
Ngaba umphathiswa angazitshata
Umama weempahla zebhlukhwe